Michael Serrano | | fit, အစာအာဟာရ
သင်၏ကျန်းမာရေးတွင်ဗီတာမင်စီပါဝင်သောအစားအစာများပါဝင်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဒါပါ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဗီတာမင်ဖြစ်သည်.
ကိုယ်ခန္ဓာသည်၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ သို့သော်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ အောက်ပါအစားအစာများကသင်၏ဗီတာမင်စီလိုအပ်ချက်ကိုပြwithoutနာမရှိဘဲကူညီပေးလိမ့်မည်.
1 ဗီတာမင်စီဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲ။ ဘာအတွက်လိုအပ်ပါသလဲ။
2 အစားအစာမှတစ်ဆင့်ဗီတာမင် C ဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
အက်စ်ကောဘစ်အက်စစ်အဖြစ်လူသိများ, ဗီတာမင်စီ၏နေ့စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးမှာ ၉၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်, 2.000 မီလီဂရမ်အများဆုံးကန့်သတ်ဖြစ်ခြင်း။ ဗီတာမင်စီနှင့်ဖြည့်စွက်ချက်များရှိပါသည်၊ သို့သော်သင်သည်အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများပေါများသောအစားအစာအမျိုးမျိုးကိုစားပါကသင်၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပြnoနာမရှိပါ။
ဗီတာမင်စီတွင်ပါဝင်သောအရေးကြီးသောကဏ္ the ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်နှင့်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး။ ဗီတာမင်စီသည်သံဓာတ်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှစုပ်ယူသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သံဓာတ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ပဲပင်များထဲတွင်ပါ ၀ င်သည်) ကိုဗီတာမင်စီနှင့်အတူအစားအစာများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
ဤ antioxidant vitamin ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသားအရေ၊ အရိုးနှင့်သွားတို့၏အခြေအနေတွင်သိသာသည်.
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ ကယ်လစီယမ်အစားအစာများ။ သင်၏အရိုးများခိုင်မာစေရန်ကယ်လစီယမ်အလုံအလောက်ရရှိရန်သင်စားသင့်သည့်နေရာတွင်သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
အစားအစာမှတစ်ဆင့်ဗီတာမင် C ဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
အခြားဗီတာမင်များနှင့်မတူဘဲ, အထူးသဖြင့်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှဗီတာမင်စီကိုရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဗီတာမင်စီပါဝင်သောအစားအစာများသည်သာမန်အစားအစာများဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်သင့်အစားအစာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ကျန်းမာ၏သော့ချက်အပိုင်းအစ မြေထဲပင်လယ်အစားအစာ, ဤစွယ်စုံဟင်းသီးဟင်းရွက်ဗီတာမင်စီကိုအလွန်ကြွယ်ဝသည်။ ငရုတ်ကောင်းအဝါရောင်သည်ဗီတာမင်စီအများဆုံးပါဝင်သောအရာဖြစ်ပြီး (၁၀၀ ဂရမ်လျှင် ၁၈၄ မီလီဂရမ်), အနီရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်။
သင်၏အစားအစာထဲသို့လတ်ဆတ်သော parsley အနည်းငယ်ထည့်ခြင်းသည်သင့်အားဗီတာမင်စီပေးသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဒီအစားအစာထဲမှာ ၁၀၀ ဂရမ်မှာဗီတာမင်စီ ၁၃၃ မီလီဂရမ်ပါရှိပါတယ်။
Citrus အသီးများသည်ဗီတာမင်စီ၏အကောင်းဆုံးလူသိများသည့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ နံနက်စာအတွက်သို့မဟုတ်အချိုပွဲအဖြစ်လိမ္မော်သီးတစ်လုံးသည်အကြံပြုထားသောနေ့စဉ်ပမာဏနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ Lemon, Lime, Tangerine နှင့် Grapfruit တို့သည်ဗီတာမင်စီရရှိရန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။
၁၀၀ ဂရမ် kale သည်ဗီတာမင်စီ ၁၂၀ မီလီဂရမ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုဒီဗီတာမင်ရဲ့အကောင်းဆုံးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်စေတယ်။ ၎င်းကိုညင်ညင်သာသာရေနွေးငွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ၊ သို့ဖြစ်ရာသင်သည်လုပ်ငန်းစဉ်၌ဗီတာမင်စီအလွန်အကျွံမဆုံးရှုံးပါ။
အာလူးကိုဝါသနာပါသူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်သင်ကံကောင်းပါစေ။ ဒါပါ ဒီအစားအစာကဗီတာမင်စီကောင်းတယ်အခြားအာဟာရများလည်းရှိသည်။
၎င်းသည်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောအသီးဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဗီတာမင်စီပမာဏကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၁၀၀ ဂရမ် kiwi ကသင့်အားဗီတာမင်စီ၏ ၉၀ မီလီဂရမ်ကိုနေ့စဉ်ထက်ကျော်လွန်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ဗီတာမင်စီပါဝင်မှုသည်လိမ္မော်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်.
၎င်းသည်ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ပန်းဂေါ်ဖီရှိသည့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်းဂေါ်ဖီ ၁၀၀ ဂရမ်သည်ဗီတာမင်စီ၏ RDA နှင့်ညီသည်။ အမှန်မှာချက်ပြုတ်ပြီးသည်နှင့်ဗီတာမင်စီပမာဏလျှော့ချနိုင်သည်မှာမှန်သော်လည်းဗီတာမင်စီနှင့်အခြားအရေးကြီးသည့်အာဟာရဓာတ်များကိုရရှိရန်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအစားအစာဖြစ်နေဆဲပင်။
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်မှုသည်ပန်းဂေါ်ဖီနှင့်တူ၏။ ရေနံစိမ်းနှင့်သူတို့နီးကပ်သည် အစားအစာ ၁၀၀ ဂရမ်လျှင်ဗီတာမင်စီ ၉၀ မီလီဂရမ်။ သို့သော်ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်ဗီတာမင်စီပါဝင်မှုလျော့နည်းစေသည်။ သို့သော်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကဲ့သို့သင့်အစားအစာထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းမှအကျိုးများစွာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီအသီးသည် နွေရာသီတွင်သင်၏အစားအစာကိုလန်းဆန်းစေသည့်အပူပိုင်းထိကိုပေးစွမ်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဗီတာမင်စီပါ ၀ င်သည့်သစ်သီးဝလံများသည်သစ်သီးဖျော်ရည်များနှင့်အတူဖျော်ရည်တွင်အရသာရှိပြီးကျန်းမာသောအသင်းဖြစ်သည်။
သင်ဟာဗီတာမင်စီပိုလိုအပ်ရင်စတော်ဘယ်ရီဟာရွေးချယ်စရာကောင်းပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီအနည်းငယ်သည်သင့်အားအကြံပြုထားသောနေ့စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ ၎င်းသည်မန်းဂနိစ်၊ ဖောလိတ်နှင့်ပိုတက်စီယမ်တို့၏ပါဝင်မှုကိုသတိပြုသင့်သည်။
(၁၀၀ ဂရမ်လျှင် ၁၀၀ ဂရမ်တွင်ဗီတာမင်စီ ၅၀ မီလီဂရမ်အပါအ ၀ င်) ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများကြွယ်ဝသောပန်းဂေါ်ဖီသည်ကယ်လိုရီအနည်းငယ်သာအတွက်အာဟာရများစွာကိုပေးသည်။ ဒီလိုမျိုး, ၎င်းသည်ဗီတာမင်စီရရှိရန်နှင့်မွေ့လျော်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ဗီတာမင်စီပါဝင်သောအစားအစာများ
အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဗီတာမင် C အကြောင်းကိုခေါင်းစဉ်